कस्ता हुन्छन् शुक्रबार जन्मेका मानिस ? ज्योतिषशास्त्र यस्तो भन्छ …. – Suchana Hub
कस्ता हुन्छन् शुक्रबार जन्मेका मानिस ? ज्योतिषशास्त्र यस्तो भन्छ ….
काठमाण्डौ । मानिसहरुमा विश्वास छ कि जन्मेको महिना ,गते र बारले मासिको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार शुक्रबार जन्मने व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेर तल उल्लेख गरिएको छ : शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिको मन दिमाग र शरिर निकै राम्रो हुने गर्दछ । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति राम्राे प्रवक्ता हुन्छन् । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति निकै सहनशील हुन्छन् । शुक्रबार जन्मने व्यक्तिलाई संगित,फिल्मी क्षेत्र,मिडिया,खेलकुद जस्ता कुराहरुले आकर्षि गर्दछ । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति बुद्दिमानी हुन्छन् भने समाजमा प्रतिष्ठित हुन्छन् ।
शुक्रबार जन्मने व्यक्ति मुश्किलदेखी डराउदैनन । शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिले दैनिक लक्ष्मिकाे पुजा गर्दा फलदायी हुन्छ । यदि तपाई पुरुष हुनुहुन्छ भनिे महिलाहरुमा र महिला हुनुहुन्छ भनेपुरुष्हरुमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ । शुक्रबार जन्मने व्यक्तिहरु करियरमा सफल हुन्छन् । शुक्रबार जन्मने व्यक्तिलाई रिस निकै कम उठछ तर जब रिस उठछ नजिक भएका वयक्तिको हालत खराब हुन्छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
शुक्रबार जन्मने व्यक्तिले प्रत्येक कुराहरुमा सफलता निकै ढिलो पाउछन् तर सफलता पाएपछि स्थायी रुपमा पाउछन् , अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा शुक्रबार जन्मने व्यक्ति मेहनती हुन्छन् र संघर्ष गर्न सक्दछन् । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति धेरैजसो रचनात्मक क्षेत्रमा देखिन्छन । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति निकै भावुक हुन्छन जसका कारण कहिलेकाहि तपाई दुखि पनि हुनुहुन्छ । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति निकै साथि हुन्छन तर साचो मित्र निकै कम हुन्छन ।
Previous आज शुक्रबार यसरी रिझाउनुहोस् धनकी देवी लक्ष्मीलाई, हुन्छ धनको वर्षा
Next हिन्दू धर्ममा किन पुजिन्छन् यति धेरै देवीदेवता ? को हुन् भगवान ?